‘मेड इन सहारा’ – Sahara Club Pokhara
Introduction Sahara Club
Sahara Club President
Executive Members by Year
Executive Members 2055-2056
Executive Members 2056-2058
Executive Members 2058-2060
Executive Members 2060-2062
Executive Members 2064-2066
Executive Members 2066-2068
Executive Members 2068-2070
Sahara Club UK
Sahara Club HK
Sahara Club Australia
Goldcup Details in PDF
18th Aaha Rara Diary
18th Aaha Rara Gold Cup Football Tournament 2020 Match Summery
Sahara Club Pokhara Logo
Sahara UK Logo
Sahara HK Logo
Sahara Australia Logo
‘मेड इन सहारा’
मोफसलमा हुने गोल्डकप प्रतियोगितामा पोखरामा आयोजना हुने आहा रारा गोल्डकपको पृथक पहिचान छ । विपन्न वर्गका खेलाडीलाई एकेडेमीमा राखेर वर्षभर आवास सहित प्रशिक्षण दिनकै लागि गोल्डकप संचालन हुँदै आएको छ ।
पहिलो संस्करण क्याराभान गोल्डकपको नाममा भएको यस गोल्डकपको १८ औं संस्करण बिहीबारदेखि सुरु भयो । यसपटक उद्घाटन खेलमा आयोजक टोली सहाराले ए डिभिजन लिगको टोली ब्रिगेड ब्वाइजसँग खेल्दा टोलीको लागि विशेष दिन बन्यो । यसअघि पोखराका स्थानीय स्टार खेलाडीलाई समेट्दै टोली निर्माण हुने गर्थ्यो । विगतमा सहारामै प्रशिक्षण लिएका कमै खेलाडी टोलीमा रहन्थे ।
यसपटक सहारामै प्रशिक्षणरत ६ खेलाडीले टोलीमा स्थान बनाएका छन् । टोलीको प्रशिक्षकका रुपमा पनि सहारामा नै प्रशिक्षण लिएर ए डिभिजन लिगमा लामो समय खेलेका विष्णु गुरुङ छन् । राष्ट्रियु फुटसल टोलीका समेत प्रशिक्षक रहिसकेका विष्णुले पछिल्लो ७ महिनादेखि सहारामा नियमित प्रशिक्षण दिंदै आएका छन् । बिहीबार बिबिसीविरुद्ध सुरुवाती रोजाईमा नै ४ खेलाडीले स्थान बनाए ।
प्रशिक्षक गुरुङले अभिषेक राना, अनिश लिम्बू, कमल मगर र जीवन रायमाझीलाई पहिलो रोजाइमा स्थान दिए । प्रमिश गुरुङले बेन्चबाट मैदान प्रवेश गर्दै खेले । शिशिर क्षेत्री भने बेन्चमा नै सिमित भए । सहाराबाट प्रशिक्षणरत खेलाडी एकै संस्करणमा सिधै टोलीमा परेको यो नै सर्वाधिक संख्या हो । सहाराले उद्घाटन खेलमा बिबिसीलाई ३-२ ले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात पनि गर्यो ।
प्रशिक्षक गुरुङ खेलाडीको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट रहेको बताए । ‘ ए डिभिजन टोलीविरुद्ध हाम्रो खेलाडीले राम्रो खेले । मैले यो स्तरको प्रदर्शन गर्छन भन्ने सोचेको थिइन । योजना अनुसार नतिजा पनि आयो । पहिलो खेलमा नै यो स्तरको प्रदर्शन राम्रो हो,’ उनले भने ।
गुरुङका अनुसार शारीरिक रुपमा भने खेलाडी केहि कमजोर देखिए । ‘ उमेरको कारण पनि हुनुपर्छ, फिटनेसमा भने केहि कमजोर सावित भयौं । अतिरिक्त समयसम्म खेल्दा पनि केहि कठिन भयो । हामीले अब स्ट्रेन्थ ट्रेनिङमा ध्यान दिएर कमजोर पक्षलाई पनि सुधार गर्नेछौं,’ उनले थपे ।
सहाराले अब क्वाटरफाइनलमा पुलिसको सामना गर्दैछ । त्यसका लागि प्रशिक्षक गुरुङले सक्दो मिहिनेत गर्ने बताए । ‘ हामीले जित्ने भनेर दावा गर्न सक्दैनौं । पुलिस राम्रो टोली हो र हामी आफ्नो योजना अनुसार खेल्नेछौं । पुलिसको फिटनेस बलियो भएकाले पनि हामीले काउन्टर अट्याकमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । आशा गरौँ राम्रो नतिजा आउनेछ,’ उनले थपे ।
सहाराले लामो समयदेखि गोल्डकपकै मुनाफाबाट एकेडेमी संचालन गर्दै आएको छ । गत संस्करण रंगशाला पुनर्निर्माणका कारण गोल्डकपमा अपेक्षित रकम उठ्न नसक्दा एकेडेमी संचालनमा कठिनाइ भएको थियो । यसपटक भने रंगशालामा सिटसमेत रहेकाले आहा गोल्डकप थप भव्य हुने आयोजकले अपेक्षा राखेको छ ।
बिहीबार, फाल्गुन २२, २०७६
सहारा क्लबले राष्ट्रिय टोलीका सुजल श्रेष्ठलाई सम्मान गर्ने
कठीन परिस्थितिको ‘सहारा’
जापानबाट सहारा एकेडेमीका वालकहरुलाई जर्सी सेट प्राप्त
सहारामा आश्रित बालकहरुलाई विफ, मास्क र सेनीटाइजर प्रदान
राखेप सदस्य सचिब सिलवालद्वारा सहारा एकेडेमीको अवलोकन
१८ औं आहा ! रारा गोल्ड कपबाट १८ लाख ९७ हजार बचत
सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारबाट पौडेल सम्मानित...
Football Top of the World FIFA
In Nepal, the uplifting Sahara Academy helps homeless youth with support, education and football training. Nepalese international Anil Gurung visits his old club and gives hope to young players.
Caravan Gold Cup 2002
18th Aaha RaRa Gold Cup 2076 Final
MMC Winner of 18th Aaha RaRa Gold Cup 2076 - Src: pokharacity.com
Aaha Rara Song Video
Singer: Binod Baniya / Ajuda Sharma Thapa
Lyrics: Aarju Bista Salyani
Sahara Academy Pokhara
Sahara Academy Pokhara, Dobilla, Pokhara-17.
सहारा क्लबका पदाधिकारीहरू स्वागतम गर्दै
साँच्चै सहारा बन्यो सहारा एकेडेमी
Sahara Academy Ground, Dobilla
Sahara Academy Building, Dobilla
Sahara Football Academy
Copyright © 2021. Sahara Club Pokhara (Estd. 2055 B.S.) , Buspark, Pokhara-9, Kaski | Tel: +977 061 551051